September 5, 2021 – Shwe Myanmar
“မိဘမြား၏ စှနျ့လှတျမှာကို မကွောကျပဲ အသကျ၉၈နှဈအရှယျအဖိုးအိုကို လကျထပျခဲ့သညျ့ ၁၉နှဈအရှယျမိနျးကလေး၏ အကွောငျးအရငျး”
မိဘများ၏ အမွေပြတ်စွန့်လွတ်ခြင်းကိုခံယူပြီး ၁၉နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးမှ အသက်၉၈နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရင်း
အချစ်၏ထူးခြားဆန်းကျယ်မှုသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူသားအားလုံးကိုပင် အံ့အားသင့်စေခဲ့ရသည်။
အချစ်ကို ရူးမိုက်စွာခံစားမိသူတစ်ဦးသည် မျက်ကန်းတစ်ယောက်လိုပင် အရာရာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ခက်ခဲလွန်းလှသည်။
ယခုတွင်လည်း အသက်၁၉နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသော မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် မိဘများက သဘောမတူသည့်ကြားမှ အသက်၉၈နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုနှင့် လက်ထပ်ယူခဲ့သည်။
သူမသည် အဖိုးအိုနှင့် ချစ်ကြိုက်မိသည့်အတွက် ကောင်မလေး၏ မိဘများများထံတွင် အဖိုအိုမှ အင်ဒိုနီးရှားငွေ ရူပီ၁၀သန်းနှင့် တင်တောင်းခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း မိန်းကလေးဟာ လက်ထပ်ယူလိုသည့်အတွက် မိဘများက အမွေပြတ်စွန့်လွတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
ကောင်မလေးဟာ ဂရုစိုက်ခြင်းမရှိဘဲ အဖိုးအိုနှင့် လပ်ထပ်ရန်သာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
မိဘမြား၏ အမှပွေတျစှနျ့လှတျခွငျးကိုခံယူပွီး ၁၉နှဈအရှယျမိနျးကလေးမှ အသကျ၉၈နှဈအရှယျအဖိုးအိုနှငျ့ လကျထပျခဲ့သညျ့ အကွောငျးအရငျး
အခဈြ၏ထူးခွားဆနျးကယျြမှုသညျ တဈခါတဈရံတှငျ လူသားအားလုံးကိုပငျ အံ့အားသငျ့စခေဲ့ရသညျ။
အခဈြကို ရူးမိုကျစှာခံစားမိသူတဈဦးသညျ မကျြကနျးတဈယောကျလိုပငျ အရာရာကို ဆုံးဖွတျခကျြခရြနျ ခကျခဲလှနျးလှသညျ။
ယခုတှငျလညျး အသကျ၁၉နှဈအရှယျသာရှိသေးသော မိနျးကလေးတဈဦးသညျ မိဘမြားက သဘောမတူသညျ့ကွားမှ အသကျ၉၈နှဈအရှယျအဖိုးအိုနှငျ့ လကျထပျယူခဲ့သညျ။
သူမသညျ အဖိုးအိုနှငျ့ ခဈြကွိုကျမိသညျ့အတှကျ ကောငျမလေး၏ မိဘမြားမြားထံတှငျ အဖိုအိုမှ အငျဒိုနီးရှားငှေ ရူပီ၁၀သနျးနှငျ့ တငျတောငျးခဲ့ပါတယျ။
သို့သျောလညျး မိနျးကလေးဟာ လကျထပျယူလိုသညျ့အတှကျ မိဘမြားက အမှပွေတျစှနျ့လှတျမညျဟု ခွိမျးခွောကျခဲ့သညျ။
ကောငျမလေးဟာ ဂရုစိုကျခွငျးမရှိဘဲ အဖိုးအိုနှငျ့ လပျထပျရနျသာ ရှေးခယျြဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။
“ရှာကြောငျးမှာပဲ ရိုးရှငျးစှာ ကောငျမှု အလှူလေးတဈ ခု ပွုလုပျရငျး မွနျမာနိုငျငံသူ မွနျမာနိုငျငံသားမြားအတှကျ မတ်ေတာပို့ ဆုတောငျးပေးခဲ့တဲ့ ထကျထကျမိုးဦး”
တစ်ခေတ်မှာ ထက်ထက်မိုးဦးခေတ်ရယ်လို့ နာ
း ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အခိုင်အမ
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းထူးချွန်တဲ့ သူမကတော့ အကယ်ဒမီ
ဆုတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အထိ အောင်မြင်နေသူလေ
းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Live Sale တွေမှာလည်း အမြဲလို
လိုတွေ့မြင်နေရတဲ့ မထက်ကတော့ သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှု
တွေကို ဝေမျှတတ်သလို အလှူအတန်းတွေကိုလည်
း မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ် ။
အခုလည်း ဝါခေါင်လကွယ် ဥပုသ်နေ့လေးမှာ ရိုးရှင်းတဲ့ အလှူ
လေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ရွာက ဘုန်းကြီ
းကျောင်းမှာပဲ သီလယူရင်း ဆွမ်းကပ်ကာ (၇)
ရက်သားသမီးများ အတွက်လည်း မေတ္တာပို့ ဆု
တောင်းပေးခဲ့ကြောင်းကို ” ဒီနေ့ ဝါခေါင်လကွယ်
ဥပုသ်နေ့ ဆိုတော့ ရွာကျောင်းမှာပဲ သီလယူ ဆွမ်
းကပ် ရတာပေါ့။ရဥပုဒ်နေ့ ဥပုသ်နေ့ ဥပုဿ်နေ့
” ဘယ်ဟာကစာလုံးပေါင်းအမှန်လဲ မသိပေမယ့်
၇ ရက်သားသမီးကုသိုလ် ရအောင် ထက်ဆုတေ
ာင်းပေးခဲ့တယ်။ ” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပြန်
တဈခတျေမှာ ထကျထကျမိုးဦးခတျေရယျလို့ နာ
း ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ အခိုငျအမ
သရုပျဆောငျပိုငျးထူးခြှနျတဲ့ သူမကတော့ အကယျဒမီ
ဆုတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျတဲ့အထိ အောငျမွငျနသေူလေ
းပဲ ဖွဈပါတယျ။ Live Sale တှမှောလညျး အမွဲလို
လိုတှမွေ့ငျနရေတဲ့ မထကျကတော့ သူမရဲ့လှုပျရှားမှု
တှကေို ဝမြှေတတျသလို အလှူအတနျးတှကေိုလညျ
း မကွာခဏပွုလုပျလရှေိ့ပါတယျ ။
အခုလညျး ဝါခေါငျလကှယျ ဥပုသျနလေ့ေးမှာ ရိုးရှငျးတဲ့ အလှူ
လေးတဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ ။ ရှာက ဘုနျးကွီ
းကြောငျးမှာပဲ သီလယူရငျး ဆှမျးကပျကာ (၇)
ရကျသားသမီးမြား အတှကျလညျး မတ်ေတာပို့ ဆု
တောငျးပေးခဲ့ကွောငျးကို ” ဒီနေ့ ဝါခေါငျလကှယျ
ဥပုသျနေ့ ဆိုတော့ ရှာကြောငျးမှာပဲ သီလယူ ဆှမျ
းကပျ ရတာပေါ့။ရဥပုဒျနေ့ ဥပုသျနေ့ ဥပုဿျနေ့
” ဘယျဟာကစာလုံးပေါငျးအမှနျလဲ မသိပမေယျ့
၇ ရကျသားသမီးကုသိုလျ ရအောငျ ထကျဆုတေ
ာငျးပေးခဲ့တယျ။ ” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပွနျ
“ရိုးရိုးခါးနာတာနဲ့ ကြောကျကပျကွောငျ့ ခါးကွောညှပျနလေို့ စိတျညဈနရေငျ အခုနညျးလေးနညျးကို လုပျကွညျ့လိုကျပါ”
ခါးအောက်ပိုင်းနာနေတာကြာပြီ။ ဟာ ဒါဆို ကျောက်ကပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါက မှားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောက်ကပ်ပြဿနာရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာ ခါးနာတာပါတတ်ပေမယ့် အခြား ကျောက်ကပ်မဟုတ်ဘဲခါးကိုယ်တိုင်ဒဏ်ရာရနေလို့ ခါးနာတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် …. ။
ဒီတော့ ကျောက်ကပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခါးနာတာနဲ့ ရိုးရိုးခါးနာတာကို ဘယ်လိုခွဲကြမလဲ။ ။မှားလည်း မှားချင်စရာပါပဲ။ ကျောက်ကပ် နှစ်လုံးကလည်းခါးအောက်ပိုင်းပတ်လည်မှာပဲ ရှိနေတာမလား။ ဒီတော့ နှစ်ခုလုံးက ရောချင်စရာပဲပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ခုပြောပြမယ့် နည်းလေးတွေနဲ့ ခွဲလို့ရပါတယ်။
ဘာကြောင်ဖြစ်ရတာလဲ – ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်တာတွေ ။ကျောက်ကပ်ပိုးဝင်တာတွေကြောင့် ကျောက်ကပ်အောင့်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခါးနာတာကျတော့ ခါးပတ်လည်မှာရှိတဲ့ အရိုး ။ကြွက်သား နဲ့ အကြောတစ်ခုခု ဒဏ်ရာရသွားတာကြောင့် ခါးနာခြင်းဖြစ်ရတာပါ။နာကျင်မှုပုံစံ – ကျောက်ကပ်ထဲ ကျောက်တည်ရင် စူးကနဲ့နာတာမျိုးခံစားရပြီး ကျောက်ကပ် ပိုးဝင်နေတာဆိုရင်တော့ ခါးအောက်ပိုင်း အောင့်တောင့်တောင့် ဝေဒနာကို ခံစားရမှာပါ …. ။
လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ခါးပိုနာတာမျိုး မရှိသလို သူ့ဘာသာသူလည်း သက်သာမသွားတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အထဲက ကျောက်ကလေး နေရာရာရွေ့သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ နာကျင်မှု ပြင်းထန်တတ်ပါတယ် …. ။
ခါးနာတာမှာကျတော့ ကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်နေတာဆိုရင် အောင့်တောင့်တောင့် ဝေဒနာခံစားရတတ်ပြီး အာရုံကြောထိတဲ့ ခါးနာခြင်းမှာကျတော့ တင်ပါးပတ်လည် ခြေထောက်အောက်ပိုင်းနဲ့ ခြေဖဝါးတို့မှာပါ စူးကနဲ ကျင်ခနဲနာကျင်တဲ့ခံစားမှုမျိုး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကြွက်သားထိလို့ နာတာဆိုရင် ခါး ၂ ဘက်လုံးနာတတ်ပေမယ့် အကြောထိလို့ နာတာဆိုရင်တော့ ခါးတစ်ဘက်တည်းက နာနေတတ်ပါတယ် ….. ။
နာကျင့်မှု ပျံ့နှံ့ခြင်း – ကျောက်ကပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ ခါးနာခြင်းဟာ ပေါင်အတွင်းပိုင်းနဲ့ ဗိုက်အောက်ပိုင်းတွေကိုပျံ့သွားပြီး အဲဒီနေရာတွေမှာပါ နာနေတတ်ပါတယ်။အာရုံကြောထိလို့နာတဲ့ခါးနာခြင်းမှာတော့ နာကျင်မှုဟာ ခြေထောက် အောက်ပိုင်းအထိ ပျံ့သွားတတ်ပြီး ကြွက်သားထိလို့နာတဲ့ခါးနာခြင်းကတော့ ခါးပတ်လည်မှာပဲ နာကျင်မှု ဝေဒနာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
သက်သာသွားတာ ပိုးဆိုးသွားတာ – ကျောက်ကပ် ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခါးနာခြင်းက ဆေးကုသမှု မခံယူမချင်း သက်သာသွားမယ့် နာကျင်မှု မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခန္ဓာ ပုံစံအမှန်လေးပြင်လိုက်ရုံနဲ့သက်သာသွားမှာမဟုတ်သလို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်လွန်းလို့ ပိုဆိုးသွားတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ရိုးရိုးခါးနာတာကျတော့ တစ်ချိန်လုံး ခါးကိုအားပြုထိုင်နေတာ ။မတ်တပ်ရပ်တာ ကြာတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ပိုဆိုးတတ်ပြီး ကိုယ်အနေအထားကို ပြင်လိုက်တဲ့အချိန် လေ့ကျင့်ခန်းလေး လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
ခါးနာတာနဲ့အတူရှိနေတတ်တဲ့အခြား လက္ခဏာတွေ – ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်တာ ။ပိုးဝင်တာမျိုးတွေမှာ – ချမ်းတုန်ပြီးဖျားတာ ၊ပျို့အန်တာ ၊ဆီးသွားရင်နာတာ၊ ဆီးအနည်ထိုင်တာ ၊ဆီးထဲ သွေးပါတာ၊ ဆီးမထိန်းနိုaင်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကျောက်တည်တဲ့ ပြဿနာ ၊ကျောက်ကပ် ပိုးဝင် တဲ့ပြဿနာတွေဟာ ဆေးစား ၊ဆေးသောက်၊ ခွဲစိတ်မှုတွေ လုပ်မှ ပျောက်တဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်တာကြောင့် ဆရာဝန် ဆီ သွားပြီး ကုသဖို့လိုပါတယ် … ။
ရိုးရိုး ခါးနာတာမှာကျ နာနေတဲ့ ခါးနေရာက ရောင်နေတာ ၊ထိလိုက်ရင် ပိုနာတာ၊ ကြွက်သားကြီးတွေ တင်းနောတာနဲ့ ခါးအောက်ပိုင်း အားမရှိတာ စတဲ့ ဝေဒနာတွေကိုပါ ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခါးနာတာနဲ့အတူ ဆီးတွေ၊ ဝမ်းတွေ မထိန်းနိုင်တာတွေပါရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ခါးဆစ်ရိုးထဲက အကြောတွေ ထိနေတဲ့ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်ဆီ မြန်မြန်သွားဖို့လိုနေပါပီ …. ။
ခါးအောကျပိုငျးနာနတောကွာပွီ။ ဟာ ဒါဆို ကြောကျကပျဖွဈနိုငျတယျဆိုတဲ့ စကားလေးတှေ ကွားဖူးကွမှာပါ။ ဒါက မှားနတောတော့မဟုတျပါဘူး။ ကြောကျကပျပွဿနာရဲ့ လက်ခဏာတှထေဲမှာ ခါးနာတာပါတတျပမေယျ့ အခွား ကြောကျကပျမဟုတျဘဲခါးကိုယျတိုငျဒဏျရာရနလေို့ ခါးနာတာတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ …. ။
ဒီတော့ ကြောကျကပျကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ခါးနာတာနဲ့ ရိုးရိုးခါးနာတာကို ဘယျလိုခှဲကွမလဲ။ ။မှားလညျး မှားခငျြစရာပါပဲ။ ကြောကျကပျ နှဈလုံးကလညျးခါးအောကျပိုငျးပတျလညျမှာပဲ ရှိနတောမလား။ ဒီတော့ နှဈခုလုံးက ရောခငျြစရာပဲပေါ့ ။ ဒါပမေယျ့ ခုပွောပွမယျ့ နညျးလေးတှနေဲ့ ခှဲလို့ရပါတယျ။
ဘာကွောငျဖွဈရတာလဲ – ကြောကျကပျမှာ ကြောကျတညျတာတှေ ။ကြောကျကပျပိုးဝငျတာတှကွေောငျ့ ကြောကျကပျအောငျ့တဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ခါးနာတာကတြော့ ခါးပတျလညျမှာရှိတဲ့ အရိုး ။ကွှကျသား နဲ့ အကွောတဈခုခု ဒဏျရာရသှားတာကွောငျ့ ခါးနာခွငျးဖွဈရတာပါ။နာကငျြမှုပုံစံ – ကြောကျကပျထဲ ကြောကျတညျရငျ စူးကနဲ့နာတာမြိုးခံစားရပွီး ကြောကျကပျ ပိုးဝငျနတောဆိုရငျတော့ ခါးအောကျပိုငျး အောငျ့တောငျ့တောငျ့ ဝဒေနာကို ခံစားရမှာပါ …. ။
လှုပျရှားမှုကွောငျ့ ခါးပိုနာတာမြိုး မရှိသလို သူ့ဘာသာသူလညျး သကျသာမသှားတတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အထဲက ကြောကျကလေး နရောရာရှသှေ့ားတဲ့အခြိနျမြိုးမှာတော့ နာကငျြမှု ပွငျးထနျတတျပါတယျ …. ။
ခါးနာတာမှာကတြော့ ကွှကျသားဒဏျဖွဈနတောဆိုရငျ အောငျ့တောငျ့တောငျ့ ဝဒေနာခံစားရတတျပွီး အာရုံကွောထိတဲ့ ခါးနာခွငျးမှာကတြော့ တငျပါးပတျလညျ ခွထေောကျအောကျပိုငျးနဲ့ ခွဖေဝါးတို့မှာပါ စူးကနဲ ကငျြခနဲနာကငျြတဲ့ခံစားမှုမြိုး ခံစားရတတျပါတယျ။ ကွှကျသားထိလို့ နာတာဆိုရငျ ခါး ၂ ဘကျလုံးနာတတျပမေယျ့ အကွောထိလို့ နာတာဆိုရငျတော့ ခါးတဈဘကျတညျးက နာနတေတျပါတယျ ….. ။
နာကငျြ့မှု ပြံ့နှံ့ခွငျး – ကြောကျကပျကွောငျ့ဖွဈတဲ ခါးနာခွငျးဟာ ပေါငျအတှငျးပိုငျးနဲ့ ဗိုကျအောကျပိုငျးတှကေိုပြံ့သှားပွီး အဲဒီနရောတှမှောပါ နာနတေတျပါတယျ။အာရုံကွောထိလို့နာတဲ့ခါးနာခွငျးမှာတော့ နာကငျြမှုဟာ ခွထေောကျ အောကျပိုငျးအထိ ပြံ့သှားတတျပွီး ကွှကျသားထိလို့နာတဲ့ခါးနာခွငျးကတော့ ခါးပတျလညျမှာပဲ နာကငျြမှု ဝဒေနာ ရှိနတေတျပါတယျ။
သကျသာသှားတာ ပိုးဆိုးသှားတာ – ကြောကျကပျ ကွောငျ့ဖွဈတဲ့ခါးနာခွငျးက ဆေးကုသမှု မခံယူမခငျြး သကျသာသှားမယျ့ နာကငျြမှု မြိုး မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ခန်ဓာ ပုံစံအမှနျလေးပွငျလိုကျရုံနဲ့သကျသာသှားမှာမဟုတျသလို လှုပျလှုပျရှားရှား လုပျလှနျးလို့ ပိုဆိုးသှားတာမြိုးလညျး မရှိပါဘူး။ရိုးရိုးခါးနာတာကတြော့ တဈခြိနျလုံး ခါးကိုအားပွုထိုငျနတော ။မတျတပျရပျတာ ကွာတဲ့ အခါမြိုးတှမှော ပိုဆိုးတတျပွီး ကိုယျအနအေထားကို ပွငျလိုကျတဲ့အခြိနျ လကေ့ငျြ့ခနျးလေး လုပျပေးတဲ့အခြိနျမှာ သကျသာသှားတတျပါတယျ။
ခါးနာတာနဲ့အတူရှိနတေတျတဲ့အခွား လက်ခဏာတှေ – ကြောကျကပျကြောကျတညျတာ ။ပိုးဝငျတာမြိုးတှမှော – ခမျြးတုနျပွီးဖြားတာ ၊ပြို့အနျတာ ၊ဆီးသှားရငျနာတာ၊ ဆီးအနညျထိုငျတာ ၊ဆီးထဲ သှေးပါတာ၊ ဆီးမထိနျးနိုaငျတာမြိုးတှေ ရှိတတျပါတယျ။ ကြောကျတညျတဲ့ ပွဿနာ ၊ကြောကျကပျ ပိုးဝငျ တဲ့ပွဿနာတှဟော ဆေးစား ၊ဆေးသောကျ၊ ခှဲစိတျမှုတှေ လုပျမှ ပြောကျတဲ့ ပွဿနာတှဖွေဈတာကွောငျ့ ဆရာဝနျ ဆီ သှားပွီး ကုသဖို့လိုပါတယျ … ။
ရိုးရိုး ခါးနာတာမှာကြ နာနတေဲ့ ခါးနရောက ရောငျနတော ၊ထိလိုကျရငျ ပိုနာတာ၊ ကွှကျသားကွီးတှေ တငျးနောတာနဲ့ ခါးအောကျပိုငျး အားမရှိတာ စတဲ့ ဝဒေနာတှကေိုပါ ခံစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ခါးနာတာနဲ့အတူ ဆီးတှေ၊ ဝမျးတှေ မထိနျးနိုငျတာတှပေါရှိနတေယျဆိုရငျတော့ ခါးဆဈရိုးထဲက အကွောတှေ ထိနတေဲ့ ပွဿနာဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ ဆရာဝနျဆီ မွနျမွနျသှားဖို့လိုနပေါပီ …. ။
“ထမငျးကို နစေ့ဉျ ပုံမှနျမစားရသျောလညျး ကောကျတှသေ့ောပိုကျဆံအိတျကို ပိုငျရှငျထံပွနျပေးခဲ့သညျ့ လေးစားစရာ ညီအကိုလေးနှဈဦး”
ငယစွဉအွခါကလေးတို့၏ ဖှူစငရွိုးသားလှသော စိတထွားတို့ကို ပတဝွနွးကငှကွ အရောငအွမှိုးမှိုးပှောငွးလဲစတတတွောလညွးဖှဈပါတယွ။ကလေးတို့သညကွား လောကသဘာဝ၏အကှောငွးကို ဘာမှသိရှိသေးခှငွးမရှိသောလွညွး ဘဝကို ရိုးသားစှာဖှတသွနွးနကှသေူမှားဖှဈပသညွေ။
ယခုတှငလွညွး အသကွ၈နှဈအရှယကွလေးနှဈဦး၏ အပှုအမူတဈခုသညွ အသကကွှီးသူကပငွ လေးစားအတုယူဖှယရွာ ဖှဈစခေဲ့ပါတယွ။အသကွ၈နှဈအရှယွ ညီအကိုနှဈဦးဟာ အခှားသူငယခွငွှးမှားနှငွ့အတူ လမွးကှားတဈခုတှငွ ဆော့ကစားနခေဲ့ကှတာဖှဈပါတယွ။ဖိုအခှိနတွှငွ ပိုကဆွံအိတတွဈခုကို ကောကတွှေ့သောအခါ ယူဆောငခွှငွးမရှိဘဲ လုံခှုံးရေးဝနထွမွးတဈဦးထံသို့ သှားရောကကွာ ပေးဆောငခွဲ့ကှတာဖှဈပါတယွ။
လုံခှုံရေးဝနထွမွးဟာလညွး ကလေးတို့၏ ရိုးသားဖှူစငမွှုကို လေးစားခဲ့ရပှီး ကလေးတို့၏အကှောငွးကို သိရှိလိုကရွသောအခါ ပို၍လေးစားခဲ့ရပါတယွ။အကှောငွးကတော့ ကလေးငယတွို့ဟာ ငှကှေေးခှို့တဲ့သညွ့ မိသားစုကဖှဈပှီး အစားအသောကစွားရနပွငွ ခကခွဲနသေူတှဖှဈပေါတယွ။
ငယစှဉအှခါကလေးတို့၏ ဖှူစငရှိုးသားလှသော စိတထှားတို့ကို ပတဝှနှးကငှကှ အရောငအှမှိုးမှိုးပှောငှးလဲစတတတှောလညှးဖှဈပါတယှ။ကလေးတို့သညကှား လောကသဘာဝ၏အကှောငှးကို ဘာမှသိရှိသေးခှငှးမရှိသောလှညှး ဘဝကို ရိုးသားစှာဖှတသှနှးနကှသေူမှားဖှဈပသညှေ။
ယခုတှငလှညှး အသကှ၈နှဈအရှယကှလေးနှဈဦး၏ အပှုအမူတဈခုသညှ အသကကှီးသူကပငှ လေးစားအတုယူဖှယရှာ ဖှဈစခေဲ့ပါတယှ။အသကှ၈နှဈအရှယှ ညီအကိုနှဈဦးဟာ အခှားသူငယခှငှးမှားနှငှ့အတူ လမှးကှားတဈခုတှငှ ဆော့ကစားနခေဲ့ကှတာဖှဈပါတယှ။ဖိုအခှိနတှငှ ပိုကဆှံအိတတှဈခုကို ကောကတှသေ့ောအခါ ယူဆောငခှငှးမရှိဘဲ လုံခှုံးရေးဝနထှမှးတဈဦးထံသို့ သှားရောကကှာ ပေးဆောငခှဲ့ကှတာဖှဈပါတယှ။
လုံခှုံရေးဝနထှမှးဟာလညှး ကလေးတို့၏ ရိုးသားဖှူစငမှုကို လေးစားခဲ့ရပှီး ကလေးတို့၏အကှောငှးကို သိရှိလိုကရှသောအခါ ပို၍လေးစားခဲ့ရပါတယှ။အကှောငှးကတော့ ကလေးငယတှို့ဟာ ငှကှေေးခှို့တဲ့သညှ့ မိသားစုကဖှဈပှီး အစားအသောကစှားရနပှငှ ခကခှဲနသေူတှဖှဈပေါတယှ။
“ညီဖွဈသူ မငျးသှေးကို သတိရလှမျးဆှတျမိကွောငျး ဂရုဏာသကျစှာ ဆိုလာတဲ့ သရုပျဆောငျ နတေိုး…”
ညီဖြစ်သူ မင်းသွေးကို သတိရလွမ်းဆွတ်မိကြောင်း ဂရုဏာသက်စွာ ဆိုလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် နေတိုး…
နေတိုးတို့မိသားစုဟာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မင်းသွေးအတွက်လစဉ်လတိုင်းအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့သလိုမင်းသွေးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒများကိုလည်း ဖြည့်ဆည့် လုပ်ကိုင်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
မင်းသွေးဟာ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ(၃) ရက်နေ့က ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသွေးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှရုံတင်ခဲ့တဲ့မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ သတ်ကွင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ မဟူရာ ရုပ်ရှင်ရုံ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ကနေတဆင့်လည်း မင်းသွေးကို ပရိသတ်တွေက သတိရစေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
နေတိုးကလည်း မင်းသွေးရဲ့ ဆန္ဒအရ ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်ကျွန်းမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မာန်အောင်မြို့နယ်သံကျောက်တောင်
ညီဖွဈသူ မငျးသှေးကို သတိရလှမျးဆှတျမိကွောငျး ဂရုဏာသကျစှာ ဆိုလာတဲ့ သရုပျဆောငျ နတေိုး…
နတေိုးတို့မိသားစုဟာကှယျလှနျသှားပွီဖွဈတဲ့မငျးသှေးအတှကျလစဉျလတိုငျးအလှူအတနျးတှပွေုလုပျပေးခဲ့သလိုမငျးသှေးဖွဈခငျြခဲ့တဲ့ ဆန်ဒမြားကိုလညျး ဖွညျ့ဆညျ့ လုပျကိုငျပေးနတော တှရေ့ပါတယျ။
မငျးသှေးဟာ ၂၀၁၈ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာ(၃) ရကျနကေ့ ရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မငျးသှေးကှယျလှနျပွီးတဲ့နောကျမှရုံတငျခဲ့တဲ့မုနျးစှဲရုပျရှငျဇာတျကား၊ သတျကှငျး ရုပျရှငျဇာတျကား၊ မဟူရာ ရုပျရှငျရုံ ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ ကနတေဆငျ့လညျး မငျးသှေးကို ပရိသတျတှကေ သတိရစခေဲ့ပွနျပါတယျ။
နတေိုးကလညျး မငျးသှေးရဲ့ ဆန်ဒအရ ရခိုငျပွညျနယျ မာနျအောငျကြှနျးမှာ တညျထားကိုးကှယျခဲ့တဲ့မာနျအောငျမွို့နယျသံကြောကျတောငျ
“ခဈြရတဲ့ ဇနီးနဲ့သားလေးကို အန်တရာယျရှိတဲ့အရပျမှာ မထားခဲ့ဘဲ သူနဲ့အတူ လှတျမွောကျနယျမွသေို့ တဈပါတညျး ချေါသှားခဲ့တဲ့ ရနျရနျခမျြး”
ချစ်ရတဲ့ ဇနီးနဲ့သားလေးကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရပ်မှာ မထားခဲ့ဘဲ သူနဲ့အတူ လွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ တစ်ပါတည်း ခေါ်သွားခဲ့တဲ့ ရန်ရန်ချမ်း
အဆိုတော် ရန်ရန်ချမ်းကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်လူတစ်စုမှ ရန်ရန်ချမ်းအား ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုအရေးယူမှုတွေ လုပ်ထားတာကြောင့် ဘေးကင်းရာသို့ တိမ်းရှောင်နေကြရသည်မှာ အချိန်အတော်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ စိတ်မပူစေရအောင်လည်း လူမှုကွန်ယက်တွင် သတင်းအချက်အလက်များကို ရေးသားဝေမျှပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်က ရန်ရန်ချမ်းရဲ့
Facebook အကောင့်တွင် ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့မိသားစုသုံးယောက်လုံး ဘေးကင်းရာမှာရှိနေတဲ့အကြောင်း ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဖြင့် ပြသထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ရန်ချမ်းဟာ ဇနီးနဲ့သားလေးကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရပ်မှာ မထားခဲ့ဘဲ သူနဲ့အတူလွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ တစ်ပါတည်း ခေါ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့မိသားစုပုံလေးကို
ကြည့်ပြီး အရေးကြုံတဲ့အခါတိုင်း ပြည်သူတွေဘက်ကနေ ရှိနေပေးခဲ့တဲ့ ရန်ရန်ချမ်းရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂီတလောကမှ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကလည်း ရန်ရန်ချမ်းတို့ မိသားစုလေး ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ comment များရေးသားပြီး ဆုတောင်းပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုဝင်များနဲ့ ခွဲခွာပြီး တိမ်းရှောင်နေရသူများလည်း အမြန်ပြန်လည်ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
ခဈြရတဲ့ ဇနီးနဲ့သားလေးကို အန်တရာယျရှိတဲ့အရပျမှာ မထားခဲ့ဘဲ သူနဲ့အတူ လှတျမွောကျနယျမွသေို့ တဈပါတညျး ချေါသှားခဲ့တဲ့ ရနျရနျခမျြး
အဆိုတျော ရနျရနျခမျြးကတော့ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ အမှနျတရားဘကျကနေ ရပျတညျပေးနသေူတဈဦး ဖွဈပါတယျ။
အာဏာရှငျလူတဈစုမှ ရနျရနျခမျြးအား ပုဒျမ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ တရားစှဲဆိုအရေးယူမှုတှေ လုပျထားတာကွောငျ့ ဘေးကငျးရာသို့ တိမျးရှောငျနကွေရသညျမှာ အခြိနျအတျောကွာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှေ စိတျမပူစရေအောငျလညျး လူမှုကှနျယကျတှငျ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ရေးသားဝမြှေပေးနတော ဖွဈပါတယျ။မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျက ရနျရနျခမျြးရဲ့
Facebook အကောငျ့တှငျ ဓာတျပုံလေးတဈပုံ တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ သူတို့မိသားစုသုံးယောကျလုံး ဘေးကငျးရာမှာရှိနတေဲ့အကွောငျး ဓာတျပုံလေးတဈပုံဖွငျ့ ပွသထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ရနျရနျခမျြးဟာ ဇနီးနဲ့သားလေးကို အန်တရာယျရှိတဲ့အရပျမှာ မထားခဲ့ဘဲ သူနဲ့အတူလှတျမွောကျနယျမွသေို့ တဈပါတညျး ချေါသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့မိသားစုပုံလေးကို
ကွညျ့ပွီး အရေးကွုံတဲ့အခါတိုငျး ပွညျသူတှဘေကျကနေ ရှိနပေေးခဲ့တဲ့ ရနျရနျခမျြးရဲ့ ပွတျသားတဲ့ စိတျဓာတျကို လေးစားနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
ဂီတလောကမှ ညီအဈကိုမောငျနှမမြားကလညျး ရနျရနျခမျြးတို့ မိသားစုလေး ဘေးကငျးလုံခွုံကွပါစလေို့ comment မြားရေးသားပွီး ဆုတောငျးပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
မိသားစုဝငျမြားနဲ့ ခှဲခှာပွီး တိမျးရှောငျနရေသူမြားလညျး အမွနျပွနျလညျဆုံဆညျးနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး ဒီသတငျးလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျ။
“နယျပွနျသှားပွီး ပွနျမလာသေးတဲ့ခငျပှနျးကို မြှျောနရှောတဲ့ ကိုယျဝနျသညျ အမြိုးသမီး၊ မွဈထဲခုနျခဖြို့အထိတောငျ တှေးထားခဲ့”
“နယ်ပြန်သွားပြီး ပြန်မလာသေးတဲ့ခင်ပွန်းကို မျှော်နေရှာတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည် အမျိုးသမီး၊ မြစ်ထဲခုန်ချဖို့အထိတောင် တွေးထားခဲ့ ”
ဖော်ပြပါကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီးက ဇာတိခဏပြန်ဦးမယ်ဆိုပြီး ပြန်မလာသေးတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို မျှော်နေရှာသူပါ။
အခုအချိန်မှာသားဝတ်နေရေး ခက်ခဲလာလို့ မိုးစက်က စောင့ရှောက်ကူညီပေးထားပါတယ်။ မိုးစက်က အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို အခုလိုပြန်လည်ပြောပြတာက….
“ညီမမျက်နှာပုံကိုဖျက်မတင်ပါနဲ့ ။ ညီမအမျိုးသားတွေ့ရင် သူပြန်လာမယ်ထင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ် ၊ အတူတူလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန် သူ့ဇာတိခဏပြန်ဦးမယ်ဆိုပြီးအဆက်အသွယ်ပါပြတ်သွားခဲ့တာပါတဲ့…။
သူ့မှာ ကိုယ်ဝန်ကျန်တဲ့တာကိုလည်း သိမသွားပါဘူးတဲ့…။ အစကတော့ အဝတ်လျှော်၊ စက်ချုပ်ပြီးမိဘနှစ်ပါးကို ရှာကျွေးခဲ့တယ်…။
အခုတော့ ကိုယ်ဝန်က ၈ လထဲရောက်နေပြီမို့ ဘာမှအဆင်မပြေတော့တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ဆီကို အကူအညီလာတောင်းခံပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ ပိုက်ဆံတွေချည်းဘဲ ပေးခဲ့ချင်ပေမယ့် ကြွေးမှီတောင်းတဲ့လူတွေ ရှိခဲ့ရင်နောက်ရက်တွေ စားရေးသောက်ရေး အခက်အခဲရှိနေမှာစိုးလို့…
ဆန်တစ်အိတ် နဲ့ ငွေ ၃၀၀၀၀ အရင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကဲ…ဒီပိုစ့်ကို ကောင်မလေးရဲ့အမျိုးသားတွေ့ရင် အမြန်ဆုံး ကျွန်တော်မိုးစက်ဆီဆက်သွယ်ပါ…။
လောလောဆယ်တော့….ဒီအမျိုးသမီး… မီးဖွားဖို့ကိုကျွန်တော် တာဝန်ယူထားပါမယ် …..”လို့ မိုးစက်က သူ့ဖေ့ဘွတ်စ်ပေါ်မှာရေးသားထားပါတယ်။
“နယျပွနျသှားပွီး ပွနျမလာသေးတဲ့ခငျပှနျးကို မြှျောနရှောတဲ့ ကိုယျဝနျသညျ အမြိုးသမီး၊ မွဈထဲခုနျခဖြို့အထိတောငျ တှေးထားခဲ့ ”
ဖျောပွပါကိုယျဝနျသညျအမြိုးသမီးက ဇာတိခဏပွနျဦးမယျဆိုပွီး ပွနျမလာသေးတဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူကို မြှျောနရှောသူပါ။
အခုအခြိနျမှာသားဝတျနရေေး ခကျခဲလာလို့ မိုးစကျက စောင့ရှောကျကူညီပေးထားပါတယျ။ မိုးစကျက အဆိုပါအမြိုးသမီးရဲ့ဖွဈစဥျကို အခုလိုပွနျလညျပွောပွတာက….
“ညီမမကျြနှာပုံကိုဖကျြမတငျပါနဲ့ ။ ညီမအမြိုးသားတှရေ့ငျ သူပွနျလာမယျထငျပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ အလုပျ ၊ အတူတူလုပျပွီးပွနျလာတဲ့အခြိနျ သူ့ဇာတိခဏပွနျဦးမယျဆိုပွီးအဆကျအသှယျပါပွတျသှားခဲ့တာပါတဲ့…။
သူ့မှာ ကိုယျဝနျကနျြတဲ့တာကိုလညျး သိမသှားပါဘူးတဲ့…။ အစကတော့ အဝတျလြှျော၊ စကျခြုပျပွီးမိဘနှဈပါးကို ရှာကြှေးခဲ့တယျ…။
အခုတော့ ကိုယျဝနျက ၈ လထဲရောကျနပွေီမို့ ဘာမှအဆငျမပွတေော့တဲ့အခါ ကြှနျတျော့ဆီကို အကူအညီလာတောငျးခံပါတယျ။
ကြှနျတျောလဲ ပိုကျဆံတှခေညျြးဘဲ ပေးခဲ့ခငျြပမေယျ့ ကွှေးမှီတောငျးတဲ့လူတှေ ရှိခဲ့ရငျနောကျရကျတှေ စားရေးသောကျရေး အခကျအခဲရှိနမှောစိုးလို့…
ဆနျတဈအိတျ နဲ့ ငှေ ၃၀၀၀၀ အရငျပေးခဲ့ပါတယျ။ ကဲ…ဒီပိုဈ့ကို ကောငျမလေးရဲ့အမြိုးသားတှရေ့ငျ အမွနျဆုံး ကြှနျတျောမိုးစကျဆီဆကျသှယျပါ…။
လောလောဆယျတော့….ဒီအမြိုးသမီး… မီးဖှားဖို့ကိုကြှနျတျော တာဝနျယူထားပါမယျ …..”လို့ မိုးစကျက သူ့ဖဘှေ့တျဈပျေါမှာရေးသားထားပါတယျ။
“နိုငျငံခွားသို့အလုပျသှားလုပျခဲ့ပွီး လစဥျဝငျငှတှေကေို မိသားစုထံပို့ပေးခဲ့သျောလညျး ပွနျလာခြိနျမှာတော့ ဇနီးဖွဈသူမှာနောကျအိမျထောငျပွုထား၍ ဝမျးနညျးကွကှေဲကာ လမျးဘေးတှငျထိုငျငိုခဲ့သော အမြိုးသားကွီး”
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် သားလေးတစ်ယောက်ရှိရာ စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်မပြေတော့၍ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
အမျိုးသားကြီးသည် လုပ်ငန်းခွင်၌ ပင်ပန်းခက်ခဲစွာလုပ်ကိုင်ရသော်လည်း ဇနီးနှင့်သားလေးအတွက် အားကိုးစရာဆိုလို့ သူပဲရှိသည့်အတွက် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကာ လစဉ်ရရှိသမျှလုပ်အားခတွေကို မိသားစုထံ ထည့်ပေးခဲ့သည်။
အမျိုးသားကြီးသည် နှစ်တွေအတော်ကြာ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ရောဂါကာလတွင် အလုပ်မဖြစ်တော့၍ ပန်လာခဲ့စဉ် အိမ်လည်းရောက်ရော ဇနီးဖြစ်သူမှာ နောက်အိမ်ထောင်နှင့် ဖြစ်နေပြီး သူ့အားမောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အမျိုးသားသည် စားစရာမရှိ နေစရာမရှိဘဝနှင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရကာ လမ်းဘေးတွင်သာ နေခဲ့ပြီး သူဧ။် အဖြစ်ဆိုးကို တွေးမိတိုင်း ဝမ်းနည်းပြီး စိတ်နာခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် သားလေးတစ်ယောက်ရှိရာ စားဝတ်နေရေးအတွက်
အဆင်မပြေတော့၍ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားကြီးသည် လုပ်ငန်းခွင်၌ ပင်ပန်းခက်ခဲစွာလုပ်ကိုင်ရသော်လည်း ဇနီးနှင့်သားလေးအတွက် အားကိုးစရာဆိုလို့
သူပဲရှိသည့်အတွက် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကာ လစဉ်ရရှိသမျှလုပ်အားခတွေကို မိသားစုထံ ထည့်ပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသားကြီးသည် နှစ်တွေအတော်ကြာ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ရောဂါကာလတွင် အလုပ်မဖြစ်တော့၍ ပြန်လာခဲ့စဉ်
အိမ်လည်းရောက်ရော ဇနီးဖြစ်သူမှာ နောက်အိမ်ထောင်နှင့် ဖြစ်နေပြီး သူ့အားမောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားသည် စားစရာမရှိ နေစရာမရှိဘဝနှင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရကာ လမ်းဘေးတွင်သာ နေခဲ့ပြီး သူဧ။် အဖြစ်ဆိုးကို တွေးမိတိုင်း ဝမ်းနည်းပြီး စိတ်နာခဲ့သည်။
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှ အမြိုးသားတဈဦးသညျ အိမျထောငျကပြွီးနောကျ သားလေးတဈယောကျရှိရာ စားဝတျနရေေးအတှကျ အဆငျမပွတေော့၍ နိုငျငံခွားသို့ သှားရောကျပွီး ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျတဈခုတှငျ လုပျကိုငျခဲ့သညျ။အမြိုးသားကွီးသညျ လုပျငနျးခှငျ၌ ပငျပနျးခကျခဲစှာလုပျကိုငျရသျောလညျး
ဇနီးနှငျ့သားလေးအတှကျ အားကိုးစရာဆိုလို့ သူပဲရှိသညျ့အတှကျ အလုပျကိုကွိုးစားလုပျကာ လစဥျရရှိသမြှလုပျအားခတှကေို မိသားစုထံ ထညျ့ပေးခဲ့သညျ။ အမြိုးသားကွီးသညျ နှဈတှအေတျောကွာ အလုပျကွိုးစားလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ရောဂါကာလတှငျ အလုပျမဖွဈတော့၍ ပွနျလာခဲ့စဥျ
အိမျလညျးရောကျရော ဇနီးဖွဈသူမှာ နောကျအိမျထောငျနှငျ့ ဖွဈနပွေီး သူ့အားမောငျးထုတျပဈခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ အမြိုးသားသညျ စားစရာမရှိ နစေရာမရှိဘဝနှငျ့ အိုးမဲ့အိမျမဲ့ဖွဈရကာ လမျးဘေးတှငျသာ နခေဲ့ပွီး သူဧ။ အဖွဈဆိုးကို တှေးမိတိုငျး ဝမျးနညျးပွီး စိတျနာခဲ့သညျ။
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှ အမြိုးသားတဈဦးသညျ အိမျထောငျကပြွီးနောကျ သားလေးတဈယောကျရှိရာ စားဝတျနရေေးအတှကျ အဆငျမပွတေော့၍ နိုငျငံခွားသို့ သှားရောကျပွီး ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျတဈခုတှငျ လုပျကိုငျခဲ့သညျ။ အမြိုးသားကွီးသညျ လုပျငနျးခှငျ၌ ပငျပနျးခကျခဲစှာလုပျကိုငျရသျောလညျး
ဇနီးနှငျ့သားလေးအတှကျ အားကိုးစရာဆိုလို့ သူပဲရှိသညျ့အတှကျ အလုပျကိုကွိုးစားလုပျကာ လစဥျရရှိသမြှလုပျအားခတှကေို မိသားစုထံ ထညျ့ပေးခဲ့သညျ။ အမြိုးသားကွီးသညျ နှဈတှအေတျောကွာ အလုပျကွိုးစားလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ရောဂါကာလတှငျ
အလုပျမဖွဈတော့၍ ပွနျလာခဲ့စဥျ အိမျလညျးရောကျရော ဇနီးဖွဈသူမှာ နောကျအိမျထောငျနှငျ့ ဖွဈနပွေီး သူ့အားမောငျးထုတျပဈခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ အမြိုးသားသညျ စားစရာမရှိ နစေရာမရှိဘဝနှငျ့ အိုးမဲ့အိမျမဲ့ဖွဈရကာ လမျးဘေးတှငျသာ နခေဲ့ပွီး သူဧ။ျ အဖွဈဆိုးကို တှေးမိတိုငျး ဝမျးနညျးပွီး စိတျနာခဲ့သညျ။
“ဒီနရော(၇)ခုမှာ တဈနရောလောကျ မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လကျလှတျမခံပါနဲ့…”
ဒီနေရာ(၇)ခုမှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံပါနဲ့…
မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိ တတ်ကြပါတယ်။ မှဲ့ တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုစီ ရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုထားကြပါတယ် ။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြပေးမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့ မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝခြင်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ …။
နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ မှဲ့”
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက် ငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။
ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အရမ်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အောင်မြင်တတ်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် …။
နှာခေါင်းရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက် မှာမှဲ့ရှိနေမယ် ဆိုရင် သေချာပေါက်ချမ်းသာ မယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အောင်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှသာ ရရှိတတ်ပါတယ် …။ ။
ညာဘက်ပါးပေါ်မှာ ထင်ရှားပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက်မှာ အရမ်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝ လာမယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်တဲ့ …။
မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကြား မှာဖြစ်ဖြစ် မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို သာသာယာယာနဲ့ အခြေချ နိုင်မယ့် သူတစ်ဦးဖြစ် ပါလိမ့်မယ် ။
ဘဝမှာ တောင့်တစရာမလို ဘဲ ငွေကြေးပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ နေရတတ် ပါတယ်နော် …။
ခါးရဲ့ဘေး တစ်ဖက် တစ်ချက်မှာ ရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောင်းခြင်းရော ကံဆိုးခြင်းရော နှစ်မျိုးစလုံး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
ဥစ္စာပစ္စည်း ပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီး ကြီးပွားတိုးတက်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။
ညာဘက်လက်ဝါးပြင်မှာ မှဲ့ရှိရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုနှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းမယ့်အချိန် က လက်ဝါးပြင်ပေါ်က မှဲ့ရဲ့ တည်နေရာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် ။
မှဲ့က လက်ဝါးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင်ငယ် ရွယ် တဲ့အချိန်ကစပြီး အောင်မြင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီး လက်ဝါးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ရှိမယ်ဆိုရင် အသက်ရလာတဲ့
အချိန်မှာမှ စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ရင်ဘတ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာ ရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာ အများအပြားပိုင်ဆိုင်စေပြီး ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်းကို ပြသတဲ့ မှဲ့ ဖြစ်ပါတယ် …။
မေးစေ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းခြင်းကို ပြပေမဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အားနည်းပြီး အထီးကျန်နေ ရတတ်တဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ။
ဒီနရော(၇)ခုမှာ တဈနရောလောကျ မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လကျလှတျမခံပါနဲ့…
မှဲ့ နဲ့ပတျသကျပွီး အယူအဆ အမြိုးမြိုးရှိ တတျကွပါတယျ။ မှဲ့ တဈခုစီတိုငျးမှာ ဘဝနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖုံးကှယျထားတဲ့ မကျဆခြေျ့ တဈခုစီ ရှိပါတယျလို့ မှဲ့ပညာရှငျတှကေ ဆိုထားကွပါတယျ ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ နရောအမြိုးမြိုးမှာ မှဲ့တှရှေိနိုငျပွီး အခုဖျောပွပေးမယျ့ နရောတှမှောရှိတဲ့ မှဲ့တှကေတော့ ကံကောငျးခွငျးနဲ့ စညျးစိမျဥစ်စာ ကွှယျဝခွငျးကို ပေးနိုငျပါတယျတဲ့ …။
နှုတျခမျးအပျေါဘကျမှာ ရှိတဲ့ မှဲ့”
ဒီလိုမှဲ့ပိုငျရှငျတှကေ ခေါငျးနညျးနညျးမာတဲ့ သဘာဝရှိပမေဲ့ ဘာပဲလုပျလုပျ အရမျးကို မွနျမွနျဆနျဆနျ အောငျမွငျတတျတဲ့ သူတှေ ဖွဈပါတယျ …။
နှာခေါငျးရဲ့တဈဘကျတဈခကျြ မှာမှဲ့ရှိနမေယျ ဆိုရငျ သခြောပေါကျခမျြးသာ မယျဆိုတဲ့ လက်ခဏာဖွဈပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ ငှကွေေးနှဈခုစလုံးက အသကျ ၃၀ နောကျပိုငျး ဒါမှမဟုတျ အိမျထောငျကပြွီးမှသာ ရရှိတတျပါတယျ …။ ။
ညာဘကျပါးပျေါမှာ ထငျရှားပွီး ပွတျသားတိကတြဲ့ မှဲ့တဈလုံး ရှိမယျဆိုရငျ အိမျထောငျပွုပွီး နောကျမှာ အရမျးကို ခမျြးသာကွှယျဝ လာမယျလို့ သိနိုငျပါတယျတဲ့ …။
မကျြခုံးနှဈခုကွားမှာဖွဈဖွဈ၊ မကျြလုံးနှဈလုံးကွား မှာဖွဈဖွဈ မှဲ့တဈလုံး ရှိမယျဆိုရငျ ခမျြးသာပွီး ဘဝတဈခုကို သာသာယာယာနဲ့ အခွခြေ နိုငျမယျ့ သူတဈဦးဖွဈ ပါလိမျ့မယျ ။
ဘဝမှာ တောငျ့တစရာမလို ဘဲ ငှကွေေးပွညျ့ပွညျ့ စုံစုံနဲ့ နရေတတျ ပါတယျနျော …။
ခါးရဲ့ဘေး တဈဖကျ တဈခကျြမှာ ရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောငျးခွငျးရော ကံဆိုးခွငျးရော နှဈမြိုးစလုံး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ ။
ဥစ်စာပစ်စညျး ပွညျ့စုံကွှယျဝပွီး ကွီးပှားတိုးတကျမှာ ဖွဈပမေဲ့ ဘဝရဲ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ ဝမျးနညျးစရာ၊ စိတျမခမျြးမွစေ့ရာတှကွေုံရမှာ ဖွဈပါတယျ …။
ညာဘကျလကျဝါးပွငျမှာ မှဲ့ရှိရငျ ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုနဲ့ ကွှယျဝမှုနှဈမြိုးလုံး ရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးမယျ့အခြိနျ က လကျဝါးပွငျပျေါက မှဲ့ရဲ့ တညျနရောအပျေါမှာမူတညျပါတယျ ။
မှဲ့က လကျဝါးရဲ့ အပျေါပိုငျးမှာ ရှိနမေယျဆိုရငျငယျ ရှယျ တဲ့အခြိနျကစပွီး အောငျမွငျပွညျ့စုံမှာဖွဈပွီး လကျဝါးရဲ့ အောကျပိုငျးမှာ ရှိမယျဆိုရငျ အသကျရလာတဲ့
အခြိနျမှာမှ စညျးစိမျဥစ်စာနဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
ရငျဘတျရဲ့ ညာဘကျအခွမျးမှာ ရှိတဲ့မှဲ့က စညျးစိမျဥစ်စာ အမြားအပွားပိုငျဆိုငျစပွေီး ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြး ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွတျသနျးနိုငျခွငျးကို ပွသတဲ့ မှဲ့ ဖွဈပါတယျ …။
မေးစပေ့ျေါမှာရှိတဲ့ မှဲ့က စညျးစိမျဥစ်စာနဲ့ ပတျသကျရငျ ကံကောငျးခွငျးကို ပွပမေဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးနဲ့ ပတျသကျရငျ အားနညျးပွီး အထီးကနျြနေ ရတတျတဲ့ သူတှလေညျး ဖွဈပါတယျနျော …။ ။
“သငျ့လကျထဲမှာပိုကျဆံမပွတျအောငျ သခြောပေါကျ ငှစေုမိစမေညျ့ နညျးလမျး (၄) မြိုး”
တစ်လတာဝင်ငွေကို စုမိဖို့နေနေသာသာ လကုန်ခါနီးတာနဲ့ လက်ထဲငွေမလောက်တာမျိုး ကြုံကြိူက်ဖူးမှာပါ။
ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက် ငွေယိုပေါက်တွေကို သေချာရှာဖွေပြီး လစဉ်စုမယ့်ငွေပမာဏကို (အနည်းအကျဉ်းဖြစ်စေ)သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
မြင်သမျှ ဝယ်ချင်နေပါက သင် တပြားမှ စုမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ငွေကိုစုဆောင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်…(1) ၅၀/၃၀/၂၀ နည်း – ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပေမယ့် ငွေမစုမိသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ် …။
သင့်တစ်လတာဝင်ငွေကို ၃ ပုံခွဲလိုက်ပါ …။၅ဝရာနှုန်းကို လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် (ထမင်းစရိတ်၊ အိမ်စရိတ် ၊ဘေလ်စသည်) ဖယ်ပါ …။
၃ဝရာနှုန်းကို သိပ်အရေးမကြီးပေမယ် လိူအပ်သောအရာများအတွက်သုံးစွဲပါ (အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင်)၂ဝရာနှုန်းကို အနာဂတ်အတွက်စုဆောင်းပါ …။
(2) ရိုးစင်းသောနည်း – တအားစစ်စစ်စီစီ မစုချင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် …။
လစဉ်ဝင်ငွေကို ၂ပိုင်းခွဲလိုက်ပါ။တစ်ပိူင်းကိူ မဖြစ်မနေသုံးရမယ့်အရာတွေအတွက်ဖယ်ပါ။
နောက်တစ်ပိုင်းကို သင့်သွားလာလည်ပတ်စရိတ်၊ အပျော်အပါးကိစ္စများအတွက် ထားပါ။
အပျော်အပါးမက်သူများအတွက် မစုဖြစ်ရင်တောင်မှ လကုန်ထိငွေမပြတ်တော့ဘူးပေါ့ …။
(3) အခြေခံဝင်ငွေနည်း – ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိပေမယ့် ငွေစုလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် …။
သင့်လစဉ် အနည်း ဆုံးရသော ဝင်ငွေကိုတွက်ပါ။ထို့နောက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ပါ။
တစ်လအတွက် အနည်းဆုံးဝင်ငွေက၂သိန်းဆိုပါစို့။ အဲ့ထဲကနေ နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်ကို စစ်စီစွာ ဖယ်ပြီး ကျန်ငွေကို စုပါ။
အချိန်ကြာရင်စုငွေတွေ များလာပါမယ် …။(4) တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထုတ်နည်း – ငွေစုချင်ပေမယ့် လမကုန်ခင်ငွေပြတ်နေတတ်သူတွေအတွက်လေးပါ …။
သင့်တစ်လတာဝင်ငွေမှ ဘယ်လောက်ကို သုံးချင်လဲ ဘယ်လောက်ကို စုချင်လဲခွဲခြားပါ။ စုမယ့်ငွေကိုဖယ်ထားပါ။
သုံးဖို့ချန်ထားသောငွေကို ၄ပုံခွဲပါ။ တစ်ပတ်ကို၁ပုံစာပဲသုံးပါ။လစဉ်ဝင်ငွေကို ချိန်ဆပြီး သုံးစွဲပါ …။
Credit – Dr Jue( YGN Times )
တဈလတာဝငျငှကေို စုမိဖို့နနေသောသာ လကုနျခါနီးတာနဲ့ လကျထဲငှမေလောကျတာမြိုး ကွုံကွိူကျဖူးမှာပါ။
ဒါမြိုးမဖွဈဖို့အတှကျ ငှယေိုပေါကျတှကေို သခြောရှာဖှပွေီး လစဉျစုမယျ့ငှပေမာဏကို (အနညျးအကဉျြးဖွဈစေ)သတျမှတျသငျ့ပါတယျ။
မွငျသမြှ ဝယျခငျြနပေါက သငျ တပွားမှ စုမိမှာမဟုတျပါဘူး။
ငှကေိုစုဆောငျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေိုလလေ့ာကွညျ့ရအောငျ…(1) ၅၀/၃၀/၂၀ နညျး – ပုံမှနျဝငျငှရှေိပမေယျ့ ငှမေစုမိသူမြားအတှကျသာရညျရှယျပါတယျ …။
သငျ့တဈလတာဝငျငှကေို ၃ ပုံခှဲလိုကျပါ …။၅ဝရာနှုနျးကို လစဉျကုနျကစြရိတျအတှကျ (ထမငျးစရိတျ၊ အိမျစရိတျ ၊ဘလျေစသညျ) ဖယျပါ …။
၃ဝရာနှုနျးကို သိပျအရေးမကွီးပမေယျ လိူအပျသောအရာမြားအတှကျသုံးစှဲပါ (အဝတျအစား၊ အသုံးအဆောငျ)၂ဝရာနှုနျးကို အနာဂတျအတှကျစုဆောငျးပါ …။
(2) ရိုးစငျးသောနညျး – တအားစဈစဈစီစီ မစုခငျြသူမြားအတှကျ ရညျရှယျပါတယျ …။
လစဉျဝငျငှကေို ၂ပိုငျးခှဲလိုကျပါ။တဈပိူငျးကိူ မဖွဈမနသေုံးရမယျ့အရာတှအေတှကျဖယျပါ။
နောကျတဈပိုငျးကို သငျ့သှားလာလညျပတျစရိတျ၊ အပြျောအပါးကိစ်စမြားအတှကျ ထားပါ။
အပြျောအပါးမကျသူမြားအတှကျ မစုဖွဈရငျတောငျမှ လကုနျထိငှမေပွတျတော့ဘူးပေါ့ …။
(3) အခွခေံဝငျငှနေညျး – ပုံမှနျဝငျငှမေရှိပမေယျ့ ငှစေုလိုသူမြားအတှကျ ရညျရှယျပါတယျ …။
သငျ့လစဉျ အနညျး ဆုံးရသော ဝငျငှကေိုတှကျပါ။ထို့နောကျ ကုနျကစြရိတျကိုတှကျပါ။
တဈလအတှကျ အနညျးဆုံးဝငျငှကေ၂သိနျးဆိုပါစို့။ အဲ့ထဲကနေ နစေ့ဉျကုနျကစြရိတျကို စဈစီစှာ ဖယျပွီး ကနျြငှကေို စုပါ။
အခြိနျကွာရငျစုငှတှေေ မြားလာပါမယျ …။(4) တဈပတျတဈကွိမျထုတျနညျး – ငှစေုခငျြပမေယျ့ လမကုနျခငျငှပွေတျနတေတျသူတှအေတှကျလေးပါ …။
သငျ့တဈလတာဝငျငှမှေ ဘယျလောကျကို သုံးခငျြလဲ ဘယျလောကျကို စုခငျြလဲခှဲခွားပါ။ စုမယျ့ငှကေိုဖယျထားပါ။
သုံးဖို့ခနျြထားသောငှကေို ၄ပုံခှဲပါ။ တဈပတျကို၁ပုံစာပဲသုံးပါ။လစဉျဝငျငှကေို ခြိနျဆပွီး သုံးစှဲပါ …။